Qaramada Midoobay Oo Eedayn Culus U Jeedisay Dhaxal Sugaha Sucuudiga – Ilays News
Qaramada Midoobay Oo Eedayn Culus U Jeedisay Dhaxal Sugaha Sucuudiga
June 19, 2019 admin1
Riyaad (Ilays-News):- Waxaa jira caddaymo loo qaateen ah oo muujinaya in Amiirka leh dhaxalka boqortooyada Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan iyo masuuliyiin kale oo sarsare kuwaas oo shaqsiyaad ahaan loogu qabsan karo dilkii wariye Jamaal Khashoqji, sida ay sheegeen khabiir ka tirsan Qaramada Midoobay.
Warbixin ay soo saartay Agnes Callamard oo qaabilsan warbixinnada khaaska ah ayaa sheegtay in caddaymaha la hayo ay u qalmaan in la sii sameeyo baaritaanno dheeri ah oo madaxbannaan isla markaasna dhexdhexaad ah.
Khashoqji ayaa lagu dilay qunsuliyadda uu Sacuudiga ku leeyahay magaalada Istambuul ee dalka Turkiga.
Masuuliyiinta Sacuudiga ayaa ku adkaystay in dadkaasi aysan ku shaqaynin amar ka soo baxay Amiir Maxamed.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa 11 ruux oo aysan shaacin magacyadooda saartay maxkamad qarsoodi ah, iyadoo u haysata dilkii Khashooqji, shan ka mid ah dadkaas ayayna rabtaa in dil toogasho ah lagu xukumo.
Si kastaba ha ahaatee Callamard ayaa sheegtay in xukunkaasi uu ka hoos maray habraacii caalamiga ahaa iyo nidaamyadii la aqbali karay, waxayna ku baaqday in meesha laga saaro